DPA ၏အသစ် 4560 CORE Binaural နားကြပ်မိုက်ကရိုဖုန်းသည်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံဖမ်းယူမှုကိုရိုးရှင်းစေသည် - NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » DPA ၏အသစ် 4560 CORE Binaural နားကြပ်မိုက်ကရိုဖုန်းသည်ကြည်လင်သောအသံဖမ်းယူမှုကိုရိုးရှင်းစေသည်
DPA ၏အသစ် 4560 CORE Binaural နားကြပ်မိုက်ကရိုဖုန်းသည်ကြည်လင်သောအသံဖမ်းယူမှုကိုရိုးရှင်းစေသည်
ALLEROED, ဒိန်းမတ်, ဒီဇင်ဘာ 2, 2019 - သူတို့၏စီမံကိန်းများအတွက်စစ်မှန်သောစွဲငြိဖွယ်အသံကိုဖမ်းယူလိုသောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများအပါအ ၀ င် YouTubers၊ အသံဒီဇိုင်နာများ၊ podcasters များ၊ ဘလော့ဂ်ဂါများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအနေဖြင့်ယခုအသစ်ကိုစတင်ခြင်းအားဖြင့်ယခုလွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ 4560 Core Binaural နားကြပ်မိုက်ကရိုဖုန်း ဒိန်းမတ်ထုတ်လုပ်သူမှ DPA မိုက်ကရိုဖုန်း.
Binaural နားကြပ်အသစ်သည် DPA ထုတ်ကုန်များအားနိုင်ငံတကာတွင်ကျော်ကြားသောသာလွန်ကောင်းမွန်သောအသံအရည်အသွေးကိုရရှိစေသည်။ မိုက်ခရိုဖုန်း၏အရည်အသွေးမြင့်အရည်အသွေးက၎င်းတို့အားနားကြပ်တစ်ခုစီကြားရသောအရာမှန်သမျှကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဖမ်းယူနိုင်ပြီးနားကြပ်ကိုနားထောင်သူများသည်တုန်ခါမှုကောင်းသောအသံကိုခံစားနိုင်သည်။ ဤအရည်အချင်းများသည်အခြားအပလီကေးရှင်းများဖြစ်သည့်အသံစနစ်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၊ အသံအရည်အသွေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ပြဇာတ်ရုံများ၊ ဂျက်ဇ်ဂီတနှင့်ဂန္ထဝင်ဂီတသမားများကလည်းအလားအလာကောင်းများကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ အနုပညာရှင်များ၏အနုပညာကိုပရိသတ်များနှင့်မျှဝေခြင်းကိုအနုပညာရှင်များ၏ရှုထောင့်မှအသံဖမ်းခြင်းသည်လုံးဝအနုပညာရှင်များ၏အသံအတွေ့အကြုံကိုပရိသတ်များနှင့်မျှဝေခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်, အန္တိမဝန်းကျင်အတွေ့အကြုံကို။
DPA ၏ 4560 CORE Binaural နားကြပ်၏အဓိကအရာမှာနားချိတ်နှစ်ခုပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောအသုံးပြုသူ၏နားကြပ်အပြင်ဘက်တွင်ထိုင်။ (နားကြပ်တစ်စုံကဲ့သို့) 4060 CORE အသေးစားမိုက်ခရိုဖုန်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှတ်တမ်းတင်သူမှကြားသောအသံကို (1: 1) တိုက်ရိုက်ဖမ်းယူစေသည်။ နားချိတ်များသည်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သော၊ အလွယ်တကူဝတ်ဆင်နိုင်ပြီးတစ် ဦး ချင်းစီ၏အရွယ်အစားနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လွယ်ကူသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောနားကြပ်နှင့်တွဲထားသည်။ Foam ဖန်သားပြင်များသည်မိုက်ခရိုဖုန်းများဖြင့်သူတို့၏အနေအထားကိုလုံခြုံစေရန်နှင့်လေဆူညံမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
4060s များသည်အဓိကရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းကဲ့သို့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံသွင်းစက်အများအပြားကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည် Spider-Man: Homecoming နှင့် မစ်ရှင် - မဖြစ်နိုင်တာ - Fallout။ ထို့အပြင် 4060 ၏တစ် ဦး ချင်းခံနိုင်ရည်ရှိသူများသည်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော binaural အသံဖမ်းခြင်းများကိုနားထဲသို့ "ပြည့်စေနိုင်သည်" ဖြစ်သည်။ အခုဆိုရင်ဂရုတစိုက်တွဲစပ်ထားတဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းအစုအဝေးနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှ sensitivity ကိုအနီးကပ်ရှိသောအပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ။
အလွယ်တကူ ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်အပြင် 4560 များသည် iOS-devices များနှင့်ချိတ်ဆက်သော DPA's MMA-A Digital Audio Interface ကဲ့သို့အသံဖမ်းစက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုမည်သည့် setting အတွက်မဆိုလျင်မြန်ပြီးအဆင်ပြေသောမိုဘိုင်း binaural မှတ်တမ်းတင်နိုင်သောအဖြေကိုပေးသည်။
DPA ၏ 4560 CORE Binaural နားကြပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအသံများသည်အလွန်တိကျသဖြင့်နားထောင်သူများသည်အသံ၏ရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေလေ့ရှိသည်ဟု DPA ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာ Rene Moerch ကဆိုသည်။ “ အကောင်းဆုံးကတော့ဒီထုတ်ကုန်နဲ့အတူမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားကြပ်ကနေတစ်ဆင့်နားထောင်သင့်ပါတယ်၊ သို့ရာတွင်စတီရီယိုနှင့် Multichannel အမျိုးအစားများအတွက်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်အရောအနှောများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်နည်းစနစ်များရှိပြီး၊ ဒီထုတ်ကုန်သည်လေထုအသံအတွက်အကြောင်းအရာများကိုစုဆောင်းလိုသောရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းတင်သူများအတွက်အသုံးဝင်သည်။
Moerch ကထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်သည့် DPA 4560 CORE Binaural နားကြပ်မိုက်ကရိုဖုန်းတွင်အသုံးဝင်သည်မှာ မိုက်ခရိုဖုန်းသည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်နားကြပ်ကိုဝတ်ဆင်သူသည်နားကြပ်ကိုသာဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ သူကမိုက်ခရိုဖုန်းကိုပြဖို့လုံခြုံမှုမရှိတဲ့နေရာ၊ ရန်လိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီဟာကအသုံးဝင်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် podcast ကဲ့သို့သောရိုးရာထုတ်လုပ်မှုများအတွက်၊ binaural မှတ်တမ်းသည်ရိုးရာအသံသွင်းနည်းစနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုစွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသော၊
DPA ၏အသစ် 4560 CORE Binaural နားကြပ်မိုက်ကရိုဖုန်းကိုဒေါ်လာ 1099.95 USD ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ www.dpamicrophones.com/4560.
4560 Core Binaural နားကြပ်မိုက်ကရိုဖုန်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ DPA မိုက်ကရိုဖုန်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor နားကြပ်မိုက်ကရိုဖုန်း စွဲငြိဖွယ်ကောင်းသောအသံ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော surround sound ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-12-02
နောက်တစ်ခု: KRK Limited Edition ROKIT G4“ White Noise” စောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်ပါသည်